Global Voices teny Malagasy » Afghanistan : Atrikasa voalohany amin’ny fitorahana blaogy tao Kabul · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Avrily 2008 20:25 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Pissoa
Sokajy: Afganistana, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia
Nahatontosa ny atrikasa voalohany teo amin'ny tantaran'izy ireo ny Fikambanan'ny Mpitoraka Blaogy ao Afghanistan  [Afghan Association of Blog Writers ] (Afghan Penlog) rehefa nisedra tsy fahampian'ny vola sy ny herin'aratra. Tamin'ny 3-4 Aprily no natao tao Kabul io atrikasa io niaraka tamin'i Nasim Fekrat  sy Masoumeh Ebrahim  [Fa], mpitoraka blaogy mavitrika avy any Afghanistan.
Mpanao gazety, mpampianatra ary mpanoratra 12 no nianatra ny fitorahana blaogy an-tsoratra, amin'ny horonan-tsary, an-tsary sy ny fomba maromaro toy ny fampiasana fahana RSS.
Blaogy maro amin'ny teny Dari, Pashtou ary Anglisy no nisokatra rehefa vita ny atrikasa.
“Naharay fanontaniana betsaka avy amin'ny mpianatra ao amin'ny Oniverite ao Kabul sy mpanao gazety izay mikasa hianatra mitoraka blaogy aho, fa mbola sakana lehibe ny tsy fahampian'ny vola.” hoy i Fekrat. Efa mieritreritra hanao atrikasa hafa moa i Fekrat fa mbola betsaka no hifampizarana sy ampianarina.
Izao no nolazain ‘i Nasim Fekrat [Fa] :
Tena nilaina mihitsy ity traikefa ity. Nianatra zavatra betsaka aho. Mpanao gazety, mpanoratra, mpampianatra ary olona hafa afaka mampivoatra ny kolotsaina sy ny saina ao amin'ny fiarahamonina ao Afgahnistan no betsaka tamin'ny mpandray anjara tamin'ity atrikasa ity. Tanjona efa nokatsahiko hatry ny ela ny fikarakarana atrikasa toy izao. Noho ny fanampiani Geomap sy Masoumeh Ebrahim dia tanteraka ihany izany nony farany.
Misy sary sy tatitra hafa ao amin'ny Civil Movement of Afghanistan .
Ny fampiasana ny aterineto hampandrosoana ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety no resahin ‘i Manzarra, nianatra nitoraka blaogy tamin'io atrikasa io.
Zarain ‘i Mokhtar Pedram [Fa], mpanao gazety, amintsika kosa ny traikefany :
Natahotra ihany aho ny hiditra amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy amin'ny aterineto. Angamba olana tamin'ny lafiny teknika. Fa nanova ny fijeriko ity atrikasa nandritra ny iray andro sy tapany ity … Tsy afaka hiteny aho hoe voavahan'izay roa andro izay daholo ny olako amin'ny aterineto, fa nanapa-kevitra aho hanokatra blaogy, izay no manaporofo ny fahombiazan'ity atrikasa ity.
Zava-baovao ao Afghanistan ny fitorahana blaogy, hoy  i Safeh [Fa], ary izay ny mpampianatra vao nianatra izany.
Ny atrikasa toy izao, hoy  i Zartosht [Fa] angamba no dingana lehibe indrindra amin'ny fanaovan-gazety ao Afghanistan.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/04/09/801/
 Fikambanan'ny Mpitoraka Blaogy ao Afghanistan: http://afghanpenlog-en.blogspot.com/
 Nasim Fekrat: https://www.globalvoicesonline.org/2008/02/14/blogging-for-a-freer-afghanistan/
 Masoumeh Ebrahim: http://warasgirl.persianblog.ir/